ဒီနေ့ထွက်လာမယ့် OnePlus6Launch Event ကို ဘယ်လိုကြည့်ကြမလဲ?
16 May 2018 . 2:25 PM
OnePlus စမတ်ဖုန်းကနေ ယနေ့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့ ၂၀၁၈ မှာ ယခုနှစ်အတွက် စမတ်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို တရားဝင်ကြေညာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ OnePlus ရဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေက စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအရ အကောင်းဆုံးသော စမတ်ဖုန်းတွေလို့ သတ်မှတ်ခံထားရသလို ဈေးနှုန်းအရလည်း တခြား Flagship စမတ်ဖုန်းတွေထက် ဈေးသက်သာတဲ့အတွက် လူကြိုက်များလာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုထွက်လာမယ့် OnePlus6စမတ်ဖုန်းက OnePlus ရဲ့ ၈ လုံးမြောက် စမတ်ဖုန်းဖြစ်လာပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9 ၊ Huawei P20 Pro ၊ Sony XZ2 ၊ LG G7 ThinQ တွေနဲ့ အဓိကယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။ လက်ရှိသိထားရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းက Qualcomm Snapdragon 845 Processor ၊ 8GB RAM နဲ့ 256GB Storage တွေပါဝင်လာမယ့်အတွက် Specifications ပိုင်းအရတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
It all starts in 12 hours. What are you doing to pass the time until the big reveal? https://t.co/5TPq08B71n #OnePlus6 pic.twitter.com/99pW48MFII
အခုအချိန်ထွက်ရှိလာတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေအရတော့ OnePlus6က Glass Design ကို အသုံးပြုလာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Display မှာလည်း Notch ပါဝင်လာမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကင်မရာအနေနဲ့ OnePlus5တုန်းက စတင်ခဲ့သလိုပဲ 16MP + 20MP Dual Camera ပါဝင်လာပြီးတော့ ယခင်ထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်လာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာတော့ OnePlus6စမတ်ဖုန်းက ဒီဇိုင်းတွေအကုန်နီးပါး ပေါက်ကြားလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီည ဆယ်နာရီခွဲမှာ ကျင်းပမယ့် Launch Event က စိတ်ဝင်စားဖို့ သိပ်မကောင်းတော့ပေမယ့်လည်း OnePlus က ဘယ်လိုမျိုး Features တွေမိတ်ဆက်လာမလဲဆိုတာကတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
OnePlus6စမတ်ဖုန်းကို ဒီည Launch Event ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခု Link ကနေ ကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook နဲ့ YouTube မှာလည်း OnePlus ရဲ့ Page နဲ့ Channel တွေကနေ ကြည့်ရှုနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
OnePlus စမတျဖုနျးကနေ ယနေ့ မလေ ၁၆ ရကျနေ့ ၂၀၁၈ မှာ ယခုနှဈအတှကျ စမတျဖုနျးအသဈဖွဈတဲ့ OnePlus6စမတျဖုနျးကို တရားဝငျကွညောတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ OnePlus ရဲ့ စမတျဖုနျးတှကေ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးအရ အကောငျးဆုံးသော စမတျဖုနျးတှလေို့ သတျမှတျခံထားရသလို ဈေးနှုနျးအရလညျး တခွား Flagship စမတျဖုနျးတှထေကျ ဈေးသကျသာတဲ့အတှကျ လူကွိုကျမြားလာတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
အခုထှကျလာမယျ့ OnePlus6စမတျဖုနျးက OnePlus ရဲ့ ၈ လုံးမွောကျ စမတျဖုနျးဖွဈလာပွီး ဒီနှဈရဲ့ Flagship စမတျဖုနျးတှဖွေဈတဲ့ Samsung Galaxy S9 ၊ Huawei P20 Pro ၊ Sony XZ2 ၊ LG G7 ThinQ တှနေဲ့ အဓိကယှဉျပွိုငျသှားမှာပါ။ လကျရှိသိထားရတဲ့သတငျးတှအေရတော့ OnePlus6စမတျဖုနျးက Qualcomm Snapdragon 845 Processor ၊ 8GB RAM နဲ့ 256GB Storage တှပေါဝငျလာမယျ့အတှကျ Specifications ပိုငျးအရတော့ အကောငျးဆုံးဖွဈနမေယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
အခုအခြိနျထှကျရှိလာတဲ့ ဒီဇိုငျးတှအေရတော့ OnePlus6က Glass Design ကို အသုံးပွုလာမှာဖွဈပွီးတော့ Display မှာလညျး Notch ပါဝငျလာမယျလို့ သိရပါတယျ။ ကငျမရာအနနေဲ့ OnePlus5တုနျးက စတငျခဲ့သလိုပဲ 16MP + 20MP Dual Camera ပါဝငျလာပွီးတော့ ယခငျထကျပိုပွီး ကောငျးမှနျလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
ဒီနှဈမှာတော့ OnePlus6စမတျဖုနျးက ဒီဇိုငျးတှအေကုနျနီးပါး ပေါကျကွားလာခဲ့ပွီဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီည ဆယျနာရီခှဲမှာ ကငျြးပမယျ့ Launch Event က စိတျဝငျစားဖို့ သိပျမကောငျးတော့ပမေယျ့လညျး OnePlus က ဘယျလိုမြိုး Features တှမေိတျဆကျလာမလဲဆိုတာကတော့ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
OnePlus6စမတျဖုနျးကို ဒီည Launch Event ကွညျ့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ အခု Link ကနေ ကွညျ့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Facebook နဲ့ YouTube မှာလညျး OnePlus ရဲ့ Page နဲ့ Channel တှကေနေ ကွညျ့ရှုနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။